Mpampiasa : hamoraina ny fandoavana adidy | NewsMada
Mpampiasa : hamoraina ny fandoavana adidy
Miankina amin’ny lohahevitra lehibe telo ny hevi-dehibe tinapaka tany Ampefy. Voalohany, hamoraina ny mpampiasa amin’ny fandoavany ny adidiny ny latsakembony, mba hisitrahan’ny mpiasa ny zony mifanaraka amin’ny lalàna. Faharoa, fanentanana ny mpampiasa hameno ny fanambarana ny filazan-karaman’ny mpiasa, miaraka amin’ny taratasy fanamarinana (talon sy ny nandoavana ny latsakemboka). Azon’ny mpiasa arahi-maso rahateo ny latsakemboka voaloa ao amin’ny www.cnaps.mg. Fahatelo, fanohizana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapariaham-pahefana, hanakaikezana kokoa ny vahoaka eny ifotony.
Hofanina ny mpikarakara ny mpiasa ECD
Maro amin’ny mpiasa tsy raikitra (ECD) ny very zo eny amin’ny minisitera sy ny kaominina sy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Tsy mandray fisotroan-dronono, nefa mihoatra ny 60 taona satria tsy voaloan’ny mpampiasa ny latsakemboka. Miovaova araka ny fe-potoana iasan’ny ben’ny Tanàna izy ireny, ary miala andraikitra ny ben’ny Tanàna mpandimby. Eo koa ny mpiasa ECD miova minisitera mpiahy na mitambatra, arakaraka ny fanapahan-kevitry ny mpitondra.
Araka ireo, hiara-kiasa ny Cnaps sy ny Tahirimbolam-panjakana, manomboka amin’ity volana aogositra, ity ho an’ny faritra Analamanga. Hofanina ny mpikirakira ny volam-panjakana (agent comptable public) eny amin’ny minisitera sy ny kaominina manerana ny faritra 22. Hovitaina ao anatin’ny iray volana kosa ny faritra 21 ambiny.
Mitohy kosa ny fanofanana ny mpampiasa sy ny mpiasa ary ny delege, omen’ny sampandraharaha misahana ny asa
Feno 60 taona ny Cnaps. Anarany voalohany ny hoe “Caisse de compensation, des prestations familiales (CCPF), nifantoka tamin’ny fanampiana ny fianakaviana. Niampy fanampiana ny tratry ny loza sy aretina vokatry ny asa taty aoriana, ka lasa Caisse nationale des prestations familiales et des accidents de travail (Cnafat). Niantohana indray ny fisotroan-dronono nanomboka ny taona 1969, ka lasa Cnaps mandraka ankehitriny. Voakasik’ireo ny mpiasa eny amin’ny sehatra tsy miankina sy ny fianakaviany. Nanomboka ny 1 avrily 2016 hatramin’ny 1 avrily 2017 ity fankalazana ny faha-60 taony ity. Ahitana hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolontsaina manerana ny renivohi-paritany enina, araka ny lohahevitra hoe : “Fiahiana ara-tsosialy tsy miangatra, andraikitry ny rehetra”.
Nanatontosa: Njaka Andriantefiarinesy